/Blog/Methasterone (Superdrol)/I-Oral Strongest Oral Strongest Steroids Methasterone (Superdrol) iPhormone
ezaposwa ngomhla 03 / 24 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Methasterone (Superdrol).
1. Yintoni i-Methasterone (Superderol)? 2. Ziziphi iiMveliso eziQulise i-Methasterone powder?
3. I-Methasterone Half Life 4. Isikhathi sokuThola iMethasterone
5. Usetyenziso lwezoMpilo lweMethasterone 6. IiNzuzo zoLwakhiwo lweMethasterone
9. I-Methasterone Cycle kunye neMethasterone Isilinganisi 10. Isiphumo seMethasterone
11. Imiphumo Yecala leMethasterone 12. I-Methasterone yokuThengiswa
Yintoni i-Methasterone (Superderol)?
Ngendlela elula, i-Methasterone, eyaziwa nangokuthi i-methyldrostanolone, ngokuthengiswa ngegama le-brand Superdrol, yenye yeyona ndlela yomelele kakhulu yomlomo kunye ne-anabolic-androgenic steroid ngomlomo.AAS). Le steroid yomlomo ithandwa ngabadlali, abakhi bomzimba kunye nabo bafuna ukwakha ubunzima bomzimba. Ukuba ufumana umoya weli chiza nje ngoku, nantsi yethu ngcaciso epheleleyo yeMethasterone eya kukuxelela yonke into ofuna ukuyifumana ngayo.
Iipropathi zezixhobo zamachiza:
Igama leekhemikhali ye-Methasterone: UNII-GH88DY98MR
Olunye igama: methyldrostanolone
Igama lomdaka: Superdrol
I-Molecular Formula: C21H34O2
Isisindo somzimba: 318.501 g / mol
I-Melting Point: 223-2250C
Indawo yokubilisa: 423.80C
Isiqingatha sobomi: iiyure ze-8
Imbali ye I-Methasterone powder ibuyele kwi-1956, xa ifunyanwe ngexesha lophando olwenziwe yinkampani yokuvelisa iziyobisi, i-Syntex Corporation. Injongo yophando yayikufumanisa i-composound enezinto ezichasene ne-tumor ezinganceda ukulwa nomdlavuza. Kwakuyixesha lokukhangela i-compound anti-cancer engqungquthela ukuba abaphandi bekhubekile kuMethasterone (Superdrol).
Ngoxa i-Methasterone (i-superdrol) ayizange ibonise iimpawu ezininzi ezichasene ne-tumor, kwavela ukuba i-compound yayinezinye izakhiwo ezintle. Kwiimvavanyo ezilandelayo, kwafunyanwa ukuba iMethasterone (superderol) inomdla we-methyltestosterone, kodwa i-20 iipesenti kunye ne-androgenic kunye ne-400% njenge-anabolic, ivumela i-anabolic kwi-androgenic ratio (ebizwa ngokuba yi-Q-ratio) ye-20.
Nangona i-Methasterone (i-superderol) yafunyanwa kwakhona kwi-1950s, yayingakaze ifumaneke ngokuthengisa kuluntu njengesidakamizwa somuthi. Kwahlala kungabonakali kude kube yi-2005, xa umdla olutsha olufunyenwe kwinqanaba luchaza ukuba i-Methasterone (superderol) yayingaphezulu kwe-anabolic kune-androgenic. Le ngqungquthela yeendaba yinto eyona nto ifunekayo kuluntu olumzimba njengoko kwakuthetha ukuba iimpawu zomzimba zonyango zigqithise kakhulu umlinganiselo onokuchaphazela ama-hormone omzimba.
Ziziphi iiMveliso eziQulise i-Methasterone powder?
I-Superdrol yongezelelo eyaziwayo equkethe i-Methasterone powder. Imveliso ibetha ama-shelves eenkampani ezinkulu zokuncedisa kwi-2005. Ngaphantsi kwegama lohlobo lwe-Superdrol, lithengiswa njenge-supplement supplement okanye iprohormone kwaye yavuya ngempumelelo enkulu. Ku-2006, loo mveliso yenzeka ukuba ibambe ingqwalasela ye-FDA kwaye yavalwa.
Nangona i-Superdrol ivinjelwe, imarike emnyama kunye ne-counter-counter-counter-counter-counter-the-methasterone yaqhubeka ihamba emakethe. Kwi-2012, le nkunkuma yongezwa kuluhlu lwezinto ezilawulwa yi-US kunye ne-World Anti-Doping Agency (WADA). Ngaphezu koko, i-Superdrol yahlelwa njengezinto ezilawulwa yiShedyuli njengamanye AAS.
Namhlanje, i-Methasterone, ene-CAS Number 3381-88-2, isasetyenziswa ngokubanzi kummandla wokwakha umzimba kwaye abaninzi banokubheka njengenye ye-oral steroids eqinile. Uyakukufumana kwimarike njengoMethasterone, Superdrol, okanye iMethyldrostanolone.
Kukho ukuhlukahluka kwe-Superdrol eyaziwayo njengeDymethazine. Nangona ipropati efana ne-Superdrol, i-Dymethazine iyomthetho ngokupheleleyo kwi-US Ezinye iimveliso eziqulethe i-Methasterone powder ziquka i-Superdron, i-SD Extreme, i-Beastrdol, i-Phreak, ne-Maxdrol.
I-Methasterone Half Life
Ubomi bemizuzu ye-Methasterone malunga neeyure ze-8
Isikhathi sokuThola iMethasterone
Ngokweminye yedatha, amaxesha okufumanisa i-methasterone ehlala isuka kwiintsuku ezintathu ukuya malunga neentsuku ze-10.
Usetyenziso lwezoMpilo lweMethasterone
I-Methasterone (superderol) ayizange idayiswe ukusetyenziswa kwezobisi. Oku kuthetha ukuba akuzange kube yinto ekhoyo yokuthengisa imithi. Nangona kunjalo, i-Methasterone steroid ithengiswa njengento yokutya engaphezulu kwe-counter.
Kweminye yezifundo ze-Methasterone, le steroid iboniswe ekuphuculeni inhlalakahle yomntu jikelele. Kukholelwa ukuba kuphuculwe iipatheni zokulala ngeli xesha kunika umsebenzisi ukunyusa ukuzithemba. Ukongezelela, ukusetyenziswa kweMetharsterone kuye kwaxhamla kwiimvakalelo zolonwabo kunye nombono ojongene nobomi.
IiNzuzo zoLwakhiwo lweMethasterone
Mhlawumbi uyazibuza - ntoni iMethasterone? Okokuqala, kukhulisa amandla akho, kukuvumela ukuba ube neeseshoni zokufunda ezivelisayo. Okwesibini, kukunika amandla okukhulisa, kukuvumela ukuba uphakamise izisindo ezinzima. Okwesithathu, kukhuthaza ukunyamezela kwakho, kukuvumela ukuba unyamezele ukusebenza okude ixesha elide. Imiphumo ye-Methasterone imangalisa nje, ngamanqanaba aphezulu aphezulu, amandla anyukile kunye nokunyamezela okunyanisekileyo, uya kuba namava I-Methasterone inzuzo njenge:
1. I-Muscle Gain
Ukwakhiwa komzimba we-Methasterone kubangela ukwanda kwisisindo sakho esisisisindo somzimba. Unako ukufumana i-10 lbs (okanye ngaphezulu) ye-muscle ephilileyo ephakathi kweeveki ezine. Ngona iindaba ezingcono kukuba le steroid ya anabolic inezinga eliphantsi kakhulu lokuguqulwa kwi-estrogen kwaye akukho niselo ubunzima obuyifumanayo isisindo samanzi. Inyaniso yokuba ubunzima obuninzi bubunzima kakhulu, lunokugcinwa ixesha elide.
2. Ukuhla ukusinda
Ngokuqinisekileyo, ukuzisebenzisa kuyindlela efanelekileyo yokususa amaninzi amaninzi kunye nokufumana isisundu esinyamekileyo, kodwa ukongeza i-Methasterone steroid kwinqwelo yokuzivocavoca kwenza yonke imohluko. Ekubeni i-Methasterone steroid ikuvumela ukuba unyamezele ukusebenza ngokukhawuleza, uya kukwazi ukutshisa iikhalori ezininzi ngexesha lakho lokufunda. Ukongezelela, le nkunkuma ingakunceda ukuba unamathele ekudleni okungenasikhalori kwaye usakunceda ukwandisa isisindo sakho semisipha. Ngalo mveliso, kuya kuba nzima ukufumana ubunzima be-muscle kunye yehla emzimbeni Nga xeshanye.
I-Methasterone (i-superderol) ingasetyenziselwa ukukhwabanisa. Oku kungenxa yokuba iqulethe iprotheni ephezulu kwaye inyuse ukuveliswa kweeseli ezikuvumela ukuba wakhe imisipha eqinile. Umjikelezo weMethasterone ungagqitywa kwiiveki ezintlanu nje. Ngenyanga nje, unokulindela ukufumana i-8-10 lbs.
I-Methasterone (superderol) ingasetyenziselwa ukusika. Oku kubangelwa ukutshisa amafutha amaninzi emzimbeni. Ukongezelela koko, iqhuma umzimba wakho weemetabolism, ozohluthisa i-toxins eyingozi emzimbeni wakho. Ngokutyalwa imali encinci kuMethasterone steroid, unokufumana umzimba omncinane kunye nomzimba ongaphantsi kwexesha. Ngezona ziphumo ezilungileyo, kubalulekile ukuba usebenzise rhoqo njengoko uqhubeka kunye ne-Methasterone Cycle yakho.
Ezinye iintlawulo zeMethasterone ziquka:
5. Kusebenza ngokukhawuleza
Enye into malunga ne-Methasterone eyenza ababuciko bomzimba, abagijimi kunye nabathandekayo bempilo yile ngxaki yokusebenza ngokukhawuleza kweziyobisi. I-synthhesis ye-methasterone emzimbeni iphinda ikhawuleze kunezinye iziyobisi. Ngeeveki ze-4 nje, unokufumana phi ukusuka kwi-8 ukuya kuma-10 iipounds ze-mass mass. Oku kuyamangalisa, becinga ukuba ngokuqhelekileyo kuthatha inyanga kubasebenzisi ukufezekisa olu hlobo lweziphumo.
6. Unomjikelezo omfutshane
Nangona i-Methasterone steroid inomjikelezo weeveki ze-5 nje, unokugqiba umjikelezo weMethasterone kwiiveki ze-3 kuphela. Oku kuthetha ukuba unako ukuhamba kwiimjikelezo ezininzi ngaphaya kwexesha elifutshane. Ngaphezu koko, unokwandisa ixesha lakho lokuphucula ukunciphisa ubunzima beMethasterone. Umjikelo omfutshane yenza i-Methasterone ibe yinto ekhethekileyo kuwe xa ukhe ukhangela inkwenkwe yokukhaba yokuhamba ngebhayisiki.
7. Kububele kwisibindi
Inyaniso yokuba umjikelezo oqhelekileyo weMetharsterone uqhubeka kwi3 kwiiveki ze-5 kuthetha ukuba isibindi sakho siya kubonakala kule steroid ye-anabolic ngexesha elifutshane nje. Oku kuya kunika ixesha lakho lesibindi ukufumana kwakhona. Uninzi lwabantu abaye basebenzisa iMethasterone steroid ingxelo yengxaki yesibindi esilula xa usebenzisa izidakamizwa, oku kuthetha ukuba kukhululekileyo kukuthelekiswa nezinye i-steroids.
Kukho izixhobo ezahlukeneyo ongazithatha kunye ne-Methasterone steroid ukwenzela ukukhusela isibindi sakho kwaye ugcine uxinzelelo lwegazi kunye namazinga e-cholesterol. Ukukhusela isibindi sakho, kufuneka uthabathe i-2g yobisi lweengxube ngosuku ukwenzela ukukhuphaza nokuvuselela iiseli zesibindi.
Ukuxhaswa kwe-cholesterol, ucebise ukuba uthathe i-1.2 g yemvu ebomvu irayisi ngosuku. Qinisekisa ukuthatha i-100 mg ye-CoQ10 imihla ngemihla njengemvubelo ebomvu ilayisi inokunciphisa amanqanaba akho e-CoQ10. Ukuxhasa uxinzelelo lwegazi, qiniseka ukuthatha i-2g ye-hawthorn berry ngosuku.
8. Akukhuthazi ukugcinwa kwamanzi
Le yile ndlela efanelekileyo ye-steroid yokusebenzisa ukuba ufuna i-steroid yokugaya ingakunceda ulahlekelwe ubunzima bamanzi. Unokubhangqa le nyeza kunye ne-steroids emanzi ukuze uthole iziphumo eziphawulekayo. Ukudibanisa nge-steroids emanzi kuya kukukhusela ukuba ungabikho.
I-Dianabol, okanye i-Dbol nje, i-anabolic kunye neyeza kunye ne-androgenic ezinika umsebenzi omncinci wokuqhubela phambili. NjengaMethasterone 3381-88-2, iDbol ihlelwe njengesiza seShedyuli III. Inomthelela omkhulu kwiprotein ye-metabolism, kwaye iyadlula kalula kwisibindi.
Ngoxa i-Methasterone steroid kufuneka isetyenziswe kwi-20-30 mg ubuncinane kwiiveki ze-4 kwisebe, Dianabol isetyenziswe ngokufanelekileyo kwiidayari zemihla ngemihla ye-20 mg imihla ngemihla ngokungabi ngaphezu kwamaviki e-8. Oku kwenza iDbol ibe yinto efanelekileyo ye-steroid kumaxesha athile. Nangona kunjalo, i-Methasterone (i-Superdrol) ikhokelela ekuzuzeni amandla angcono kwaye yenza umzimba unzima kwaye ungcini ngakumbi kune-Dbol.
Enye into ebeka i-Superdrol kunye ne-Dianabol ngaphandle yintengo. I-Superdrol iyatholakala ngexabiso eliphantsi lifaniswa noDi Dianabol. Ngaphandle kwendlela yokufikelela kuyo, inzuzo eyenziwe ngeMethasterone (i-Superdrol) yomelele kunokuba i-Dianabol, eyenza ibe yinto ekhethekileyo kubadlali bomzimba kunye nabadlali.
NjengaMethasterone (supderdrol), i-Anadrol iphinda ibonwa njengenye ye-oral steroids enamandla kakhulu. Ngo-Anadrol, ukuzuza okuphawulekayo kwimizimba yesisipha kunye namandla kunobonakala ngexesha elifutshane kakhulu. Kuqhelekile ukuba abasebenzisi babe nokwanda kwenani le-10-15 lbs kwiiveki ze-2 kuphela.
Enye yezona ntlukwano ezinkulu phakathi kweMethasterone kunye Anadrol iyilitha. Nangona i-Methasterone iphakanyisiwe i-20-30 mg ngosuku, i-Anadrol eyiyona i-50-200 mg ngosuku. Oku kuthetha ukuba kufuneka usebenzise amanani amancinane eMethasterone steroid kuneAnadrol.
Ukuba usebenzisa i-Anadrol okokuqala, kucetyiswa ukuba uthathe kuphela i-tablet ye-50 mg. Emva kweveki, unokongeza isilinganiselo semini kwiipilisi ezimbini, esinye sithathwe ekuseni kwaye esinye sihlwa. Abo bapima ngaphezu kwe-220 lbs banokunyusa umlinganiselo we-Anadrol kwi-150 mg ngosuku kwi-3rd iveki. Kuhle ukuba uqaphele ukuba i-Anadrol iyanelisa ngokukhawuleza i-receptors, ngoko ke ukungenisa kwayo akufanele kudlule kweeveki ze-6.
Omnye umahluko phakathi prohormone I-Methasterone kunye ne-Anadrol yileyo inzuzo eyenziwa ngo-Superdrol yomelele ngakumbi kune-Anadrol. Oku kungenxa yokuba ubunzima obufunyenwe bubunzima bomeleleyo, ngoko ke lunokugcinwa ixesha elide.
Nangona u-Anadrol, nangona kunjalo, ukwakha ubunzima obunzima obonwa ngokukhawuleza emva kokuthatha ukutya ngokukhawuleza. Oku kungenxa yokuba isisindo esifumene sisisindo samanzi, ngoko silahleka ngokukhawuleza emva kokuyeka ukusebenzisa iziyobisi.
Ukugcina ubunzima bemisipha emva komjikelo we-Anadrol, kucetyiswa ukuba uqhubeke unyango lwe-steroid kunye nesinye isiyobisi se-steroid. Ukungaphumeleli ukwenza njalo, uya kufumana ukunciphisa ngokulinganayo kumzimba we-muscle kwaye uza kubuyela kwisimo sakho sokuqala. Enyanisweni, akukho enye i-anabolic kunye ne-androgenic steroid ekhokelela ekulahlekelweni okunzima kumandla kunye namandla njengoko u-Anadrol enza.
I-Methasterone Cycle kunye neMethasterone Isilinganisi
Ubuninzi bee-Methasterone ziza kuhlala zivela kwiiveki ezine ukuya ezintandathu. Ekuqalweni kokujikeleza okanye ukusika umjikelezo weMetharsterone, akufanele uthabathe ngaphezu kwe-10mg ngosuku ngeliveki yokuqala. Kwi 2nd kunye neveki ze-3rd, unako ukwandisa umlinganiselo wansuku zonke malunga ne-20mg.
Ngeveki yesine, unako ukwandisa umyinge kwi-30mg / ngosuku ukufumana iziphumo ezifanelekileyo. Kwiveki ye-10 Umjikelezo weMethasterone, kucetyiswa ukuba uthathe i-250-500mg ngeveki yeSustanon 250 kwiiveki ezilishumi. Qinisekisa ukuba usebenzise rhoqo ngokuqhubekayo nomjikelezo wakho.
Imilinganiselo ye Methasterone efanelekileyo yi-10mg ithebhu / ipilisi ethathwe ekuseni kwaye enye ithathwe ngokuhlwa. Nangona abasebenzisi abanolwazi bangathatha ukuya kwi-40mg ngosuku, abo bangakhange basebenzise le steroid ye-anabolic kufuneka bayiqhube ngokufanelekileyo kwi-10-20mg ngosuku.
Umjikelezo weMetharsterone (Suprderol)
(Oqalayo) iiveki 4-6
(Ephakamileyo) iiveki 4-6
I-Methasterone (superderol) yaziwa ngokunika iziphumo ezibalaseleyo. Uninzi lwabasebenzisi lubonakala lupakisha malunga neeplani ze-10 zeemisipha ngaphezu kweeveki ezine ukuya ezintandathu. I-compound itholakala ibe yinto enkulu yokubeka ubunzima ngokukhawuleza kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba, kuquka:
Ngaphandle kokuncedisa ukubeka ubuninzi, iMethasterone (superdrol) yandisa ngamandla akho. Uninzi lwabasebenzisi bafumana ukongeza iiplani ze-50 kwiziphakamiso zabo eziphambili kwiiveki ezine. Xa zidibene nezinye i-AAS, iMethasterone ngaphambi nangemva kweziphumo zibhetele ngakumbi.
Omnye umsebenzisi ubuyekeze iilisi kwaye wathi, "i-methasterone i-10mg ngosuku isebenza kakuhle kwiiveki ezintandathu, ndandifumana iziphumo ezimangalisayo. Eli liyeza lisebenza kakuhle. Wathanda! "
Imiphumo Yecala leMethasterone
Iimpembelelo eziqhelekileyo zeMetharsterone ziquka:
Xa i-dohasterone ephakanyisiweyo iboniswa, imiphumo emibi ye-methasterone inokuncitshiswa kakhulu. Nangona ukuba iimpawu zemizila yeMethasterone zibi, kuyacetyiswa ukuba uyeke ukusebenzisa izidakamizwa kwaye ufune unyango.
Into ebangel 'umdla kukuba kwakunokwenzeka ukufumana i-Methasterone ukuthengiswa rhoqo ngeevenkile. Nangona le nkunkuma yayivinjelwe e-US, akuthethi ukuba awukwazi ukuhlala ukuthenga iMethasterone. Unokufumana iMethasterone ngokuthengiswa kwi-intanethi, ngakumbi ukusuka e-UK naseTshayina apho isemthethweni. I-Methasterone yase-UK ne-China itholakala ngokuthengiswa phantsi kwegama legama legama. Ixabiso le-Methasterone akuyona nto into yokuxhalabisa ngenxa yokuba le nkunkuma iza kwixabiso elinomdla kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iziyobisi ezifanayo.
Van Enoo, Peter & Frans T. Delbeke (2006). "I-Metabolism kunye ne-excretion ye-anabolic steroids ekulawuleni i-doping. Umbhalo we-Steroid Biochemistry kunye ne-Biology Biology. 101: 173.
UJulius A. Vida (1969). Androgens kunye nama-Anabolic Agents: iChemistry kunye ne-Pharmacology. I-Press Press. iphe. 23 & 168.
Ringold, HJ, E. Batres, E. Necoechea (1959). "Steroids. I-2-Methyl ne-2-Hydroxymethylene-androstane Iziphumo ". Umbhalo we-American Chemical Society. 427-432
Zonke Izinto Nge-Trenbolone Inanthate Powder	I-Masteron (i-Drostanolone propionate) Imiphumo, Isisindo, Imiphumo emibi